सीके राउत अवतरणपछिका चुनौती
नेपालको संविधान जारी नहुँदै तराईमा अनौठो ढंगवाट उदाएका हुन् सीके राउत । मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संविधानका अन्तर्वस्तुमा गलफत्ती गरिरहेका बेला राउतले तराई/मधेशलाई बेग्लै राज्य बनाउने घोषणा गरे, जुन मधेश केन्द्रितसहित सबै दलका भन्दा फरक, संविधानभन्दा फरक एजेण्डा थियो ।
फरक यति कि तात्कालीन माओवादी र हाल नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि हिंसात्मक बाटो रोजे, राउतले यसो गरेनन् । उनी सरकारसँगको सम्झौता अघिसम्मपनि शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष नै भन्दै हिँडे ।
त्यही ‘शान्तिपूर्ण’ एजेण्डा नै उनलाई मुलधारको राजनीतिमा सहज अवतरण गराउने बाटो बन्यो । यतिवेला उनी ‘जनमत पार्टी’बाट मुलधारको राजनीतिमा अवतरित भएका छन् ।
नाटकीय ढंगबाट सरकारसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ बहु बिवादित बन्यो । जनकपुर विमानस्थलमा उनका कार्यकर्ताले देखाएको हर्कतले यसलाई मलजल पनि गर्यो ।
हिजो (४ चैत)बाट उनले नेपालको संविधान अनुसार दलीय गतिविधिमा संलग्न हुने प्रतिबद्धतासहित पार्टी गठन गरेकाछन् । आफ्नै नेतृत्वमा उनले गठन गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने भनेका छन् ।
बेग्लै मधेश राज्यको अभियान चलाइरहेका राउतको यो राजनीतिक अवतरण स्वागतयोग्य कदम हो । तर आशंकाहरु समाप्त भइसकेका छैनन् ।
दलको घोषणा गरिसक्दापनि राउतले जनकपुरमा देखिएका लडाकु शैलीका कार्यकर्ता उनका वैचारिक हतियार हुन् कि शस्त्रले सुसज्जित ? भन्ने बिषयमा बोलेका छैनन । स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईका जिल्लामा गतिविधि गरिरहदा राउतलाई यस्ता दस्ताको सुरक्षा थियो । पार्टी गठनपछि यी दस्ता विघठन भए कि रुपान्तरण? राउतले जवाफ दिनुपर्छ ।
संविधान पालना गर्ने प्रतिवद्धता दोस्रोपटक जनाइसक्दापनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेको अलग राज्यको वकालत गर्ने समूहमा उनले दर्ता गराएको निवेदन फिर्ता भयो कि भएन भनेर जवाफ दिएका छैनन ।
निर्वाचन आयोगसम्मको यात्रा गर्दैगर्दा राज्यसंयन्त्रले अवश्यै यो निवेदनमा चासो राख्ला । तर राउतले पारदर्शी राजनीतिक यात्रा थालेका हुन भने उनले नै पहिला यो बिषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । जवसम्म यी बिषय प्रष्ट हुँदैनन्, तवसम्म पूर्ण बिस्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
२४ फागुनको ११ बुँदे सम्झौताको जगमा दर्ता भएको उनको दलका गतिविधि राष्ट्रिय हुन कि क्षेत्रीय, जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तीन पटकसम्म राज्यका तर्फबाट इन्काउण्टरको योजनामा परिसकेका राउतकालागि तत्कालकालागि यो सफल अवतरण हो । तर दल घोषणामा देखिएको क्षेत्रीय रंग मेटाउन उनले ठूलो कसरत गर्नुपर्नेछ ।
राउतले स्पष्ट बोलिसकेका छैनन्, उनी राष्ट्रिय हुन कि क्षेत्रीय दल भनेर । तर सिराहामा पार्टी घोषणा गर्दा समेटिएको केन्द्रीय पार्टी संरचना र प्रतिनिधित्वले उनी विगतमा तराई/मधेशमा जन्मिएका दलका भन्दा फरक एजेण्डामा छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा उभिएर भुकम्पका बेला पहाड र हिमाल दुःखमा पर्दा आफु मल्हम लगाउन पहाड उक्लिएको सम्झना गरेका राउतको राजनीतिमा त्यो पहाड अट्छ कि अट्दैन, प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
यदि अट्न सकेन भने हाल तराइकेन्द्रित मौजुदा दलसमान मात्रै उनी हुनेछन् । किनकी उनको उदय नै पृथकताको मुद्धाबाट भएको हो । यो जगमा उदाएका राउतले तराइ/मधेशकेन्द्रित मात्रै मुद्धा उठाउदा त्यसैको जगमा फेरि पुराना एजेण्डामा फर्कन्छन् कि भन्ने शंसय बाँकी रहन्छ ।
अर्कोतर्फ उनको राजनीतिक उद्धेश्य तराई/मधेशको मात्र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हो कि समग्र देशको भन्ने पनि खुलिसकेको छैन । उनको पार्टीप्रतिको बिश्वास यसको खुलासामा पनि निर्भर छ ।
प्रश्नहरुकावीच मधेशकेन्द्रीत दलका लागि राउत नेतृत्वको दल पक्कै चुनौति बन्नेछ । १२ बर्षदेखि संबिधान र सत्ताको एजेण्डा वरिपरि घुमिरहेका मधेश केन्द्रित दललाई एजेण्डामा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने र आफूपनि यो बाटोमा लाग्न खोजेको हो भने राउतको कदम साँच्चिकै स्वागतयोग्य छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ६, २०७५, ००:०७:००